बबरमहलमा गिरिजाको दूत
| 2019 Nov 30 | 07:37 am	199
गोर्खादलको आतंकले सिमा नाघेको थियो । अर्कोतर्फ बीपीको हत्या नै हुने हो कि भनेर कान्छा भाइ गिरिजा शशंकित थिए । एक दिन बालसखा भीम नौलखालाई बोलाएर उनले भने, सान्दाइको ज्यान खतरामा छ । म तिमिलाई एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन्छु, त्यो पूरा गर्नु ल । २००७ सालको क्रान्तिमा मारवाडीसहित अन्य व्यवसायिक घरानाबाट चन्दा उठाई पार्टीलाई महत्वपूर्ण योगदान गरेका नौलखाले नाइँनास्ती गर्ने कुरै थिएन । नेताको आदेश शिरोधार्य गर्ने वचन दिए । २२ जुलाई १९५२ को मितिमा गिरिजाले नेपाली कांग्रेस मोरङको लेटरप्याडमा नौलखालाई लेखेका पत्रमा भनिएको छ, भीमराज, गोर्खा परिषदको सदस्य भैकन तपाई गुप्त रुपले नेपाली कांग्रेसको काम गर्नुहोस् । पत्र दिएपछि गिरिजाले भने, तपाई एक घरेलु कामदारका रुपमा भरत शमशेरको घरमा काम गर्न जानुपर्यो र त्यहाँ हुने हरेक गतिविधिबारे बरोबर जानकारी दिनुपर्यो । नमानौं नेताको आदेश, मनौं रहस्य खुल्यो भने ज्यानै जाने खतरा ।
बिलखबन्दमा परे नौलखा । अन्त्यमा, नेताको आदेश शिरोपर गर्दै विराटनगरबाट काठमाडौं हिँडे । भरत शमशेरको बबरमहलस्थित दरबारकै ढोकामा पुगे । कामको खोजीमा आएको भन्दै जागिर दिन आग्रह गरे । तराईबाट आएको मधेसी मूलको मानिस भएकाले विश्वास गरेर उनलाई चिया, खाना बनाउने काम दिइयो । गोर्खादलका महामन्त्री भरत शमशेरको दरबारमा एक महिनसम्म खाना बनाउने र भाँडा माझ्ने काम गरे । नौलखाले भनेका छन्, त्यहाँ उनीहरुलाई शंका हुने व्यवहार देखाइनँ ।
जागिर थालेको महिना दिन पुग्नै लाग्दा एक दिन दरबारको भित्री कोठामा खुकुरी दलका धेरै मानिसहरु जम्मा भएर योजना बनाउँदै थिए । नौलखाले कान ठाडो बनाइहाले । त्यो बैठकमा बीपी निवास घेराउ गरेर मार्ने षडयन्त्र बनेको उनले सुने । नौलखाको होसहबासै उड्यो । त्यो भब्य दरबार अनि चौतर्फी कडा सुरक्षा घेराबाट उम्किएर बीपीमाथि गर्न लागेको षडयन्त्र सूचना कसरी दिने भन्नेबारे नौलखा दिमाग लगाउन थाले । मानमा सोचाई आयो, गिरिजाबाबुले जुन कामका लागि खटाउनु भएको थियो, आखिर त्यो त सत्य रहेछ । अब बीपीलाई कसरी सूचना दिने ?
शरीर बबरमहलमा थियो । तर नौलखाको मनचाहिँ त्रिपुरेश्वरमा पुगेर बीपीलाई कसरी भट्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुन थाल्यो । आत्तिँदै उनी त्रिपुरेश्वरस्थित गृहमन्त्रीको निवास पुगे । नौलखा अत्तालिएको देखेर चकित हुँदै बीपीले सोधे, के भयो ? किन अत्तालिएको भीमराज ? सान्दाजु भरत शमशेरहरु हजुरलाई मार्ने षडयन्त्र गर्दै छन् । मैले आफ्नै कानले सुनेको नौलखाले भने । उनको कुरा सुनेर बीपी मुसुमुसु हाँसिरहे । कुनै प्रतिकृया दिएनन् । आफूलाई मार्ने षडयन्त्र हुँदैछ भन्ने सूचनालाई समेत बीपीले सामान्य रुपमा लिए ।
त्यसरी अत्तालिएर सूचना दिँदा पनि बीपीले नपत्याए जस्तो लागेपछि नालखाले भने, गिरिजाबाबुले मलाई सिआइडी गर्न बबरमहल खटाउनुभएको थियो । बुझ्दा त साँच्चै हजुरको हत्याको योजना बनाइरहेको आफ्नै कानले सुने सान्दाइ । त्यसपछि पुनः बबरमहल फर्किए नौलखा । उनी गृहमन्त्रीको निवास पुगेको सूचना बबरमहलमा पुगिसकेको थियो । नौलखाले भनेका छन्, धन्न मार्नचाहिँ मारेनन् । कुटाईचाही खाएँ । सब्जी लिन गएका बेला विराटनगरतिरकै मानिसको घर भएकाले मात्र छिरेको जवाफ दिएर उम्किएका थिए उनी । जगत नेपालद्वारा लिखित बीपीको विद्रोह